थाहानगरमा संक्रमितको संख्या ६९ पुगेको छ । २२ वैशाखमा ९ जनाको परिक्षण गरिएकोमा ७ जनाको पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि संक्रमितको संख्या बढेको हो । संक्रमितमध्ये १ जनालाई हेटौंडा आइसोलेशनमा रिफर गरिएको र अन्यलाई सुरक्षित रुपमा घरमै आइसोलेशनमा बस्न पठाइएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डा. रिकेश कार्कीले बताए । हालसम्म तीन जना हेटौंडा र एक जनाको काठमाडौंमा उपचार भैरहेको छ ।
यसैबीच, २२ वैशाखमा बसेको "कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशन समिति"को बैठकले कोरोना जोखिम न्यूनिकरणका लागि स्थानीय नै जागरुक हुनु पर्ने बताउदै निषेधाज्ञा अवज्ञा गरे उजुरी गर्न स्थानीयसङ्ग आग्रह गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्ट बिगतको भन्दा संक्रमण दर बढी रहेको हुँदा आफै सचेत हुनुको बिकल्प नरहेको २२ वैशाखमा बसेको बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा डा. रिकेश कार्कीले यस पटकको भाइरसले संक्रमित भएकाहरुको सिङ्गै परिवार नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था आएको बताए । बैठकमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री पसल विहान ९ बजेसम्म मात्र खोल्न निषेधाज्ञामा उल्लेख भएको भएपनि अन्य व्यवसाय समेत खोल्ने गरेको तथा होटलहरु लुकिछिपी खोल्ने गरेकोले कोरोनाको जोखिम बढेकोमा चिन्ता गरिएको छ । बैठकले त्यसरी अवज्ञा गरेमा त्यस्ता व्यवसायी विरुद्द तत्काल प्रहरी वा नगरपालिकामा उजुरी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक श्रीराम तिमिल्सिनाले नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको बताउदै नियम उलंघन गर्नेलाई कार्वाही गर्ने बताए ।
बैठकले वडावडामा गठित समितिले संक्रमितको परिवारलाई पनि निगरानी गर्नु पर्ने छलफल भएको छ । संक्रमित भई घरमै आइसोलेशनमा रहेका विरामीको अवस्था गम्भीर हुँदै गएमा थप व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मेघराज बलामी स्वयंलाई फोकल पर्सन तोकिएको छ । संक्रमितहरुको उपचारलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न उपायहरुका विषयमा समेत छलफल गरिएको सुचना अधिकारी सुरजकुमार भुजेलले जानकारी दिए ।